Raila Odinga oo ka soo horjeestay hindise ka dhan ah siyaasadda Ruto | Star FM
Home Wararka Kenya Raila Odinga oo ka soo horjeestay hindise ka dhan ah siyaasadda Ruto
Raila Odinga oo ka soo horjeestay hindise ka dhan ah siyaasadda Ruto
Madaxa xisbiga ODM Raila Odinga ayaa baarlamaanka kula taliyay in uunan ansaxin hindise sharciyeed loo gudbiyay guddiga arrimaha amniga ee golaha qaran ee xeer dejinta.
Hindisaha ayaa lagu doonayaa in dembi laga dhigo xeeladda siyaasadeed ee madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto iyo xulafadiisa oo ku dhisan taageeridda danyarta si looga gudbo nidaamka hoggaanka ee shakshiyaadka magaca leh.
Waxaa go’aanka Raila taageeray madaxa xisbiga Ford-Kenya Moses Wetangula in kastoo uu kaga soo horjeestay dhigiisa ANC Musalia Mudavadi.
Mr. Odinga iyo Mr. Wetangula ayaa sheegay in xeeladda siyaasadeed ee Ruto ay khatar tahay hasa ahaate in sharci lagu mamnuucayo la meel mariyo ay cabburinayso xuriyadda uu siyaasigu u leeyahay muujinta dareenkiisa.
William Ruto ayaa dhankiisa cid kasta oo qorshahan siyaasadeed aan ku qanacsaneyn u soo jeediyay in ay kenyaanka u soo bandhigto qaab kale oo ay ku qanci karaan.
Xisbiga ANC ee uu hoggaamiyo Musalia Mudavadi ayaa ku adkeysanaya in hannaanka siyaasadeed ee Ruto uu wadanka u horseedi karo kala qaybsanaan iyo qalalaase.
Ku xigeenka madaxa ANC ahna xildhibaanka deegaanka Lugari Ayub Savula ayaa wacad ku maray in ay taageeri doonaan xeer kasta oo lagu mamnuucayo ama dembi ka dhigaya in Kenyaanka siyaasad ahaan loo kala qaybiyo danyar iyo maalqabeeno magac leh.
Previous articleDHAGEYSO:Siyaasiinta Soomaalida oo loogu baaqay inay Xasiloonida dalka ilaaliyaan
Next articleMaxkamad aabbe ku amartay inuu taageero gabadhiisa oo ay hooyadeed kala tageen